राजिवलाई समाजसेवा गर्न सांंसद हुनै पर्छ ? – Vision Khabar
राजिवलाई समाजसेवा गर्न सांंसद हुनै पर्छ ?
। ३ माघ २०७४, बुधबार १६:५२ मा प्रकाशित
जिल्लाको पश्चिम उत्तरी क्षेत्र जुनीचाँदे गाउँपालिकामा संचार माध्याममा भाइरल ज्वोरोको प्रकोप भनियता पनि स्वास्थ्य कर्मिहरुको भाषामा भन्नुपर्दा मौसमी रुघाखोकीले जनजीवन केही समय देखि प्रभावित भयो । जाजरकोटमा केही बर्ष यता देखि यस्ता प्रकोप र विपतहरु घट्दै आइरहेका छन् ।
२०६८ सालमा झाडापखाला, २०७२ सालमा स्वाइनफ्लु र अहिले २०७४ पुसमा भाइरल प्रकोप के भने जस्तो र हल्ला गरेजस्तै विपतहरु आएकै हो त ? सत्य र वास्ताविक्त पत्ता लगाउन जरुरी भएको छ । २०६८ को झाडापखाला छिटपुट रुपमा मात्रै हो ।
त्यसलाई अतिरञ्जित गरेर एक जना मान्छेलाई सांसद बनाउन हल्ला गरियो र समाज सेवाको खोल ओडेर हल्लै–हल्लामा तिललाइै पहाड बनाइयो र त्यो प्रोपोगाण्डा सफल पनि भयो । त्यसैलाइै निरन्तरता दिने गरी पुनः २०७२ सालमा स्वाइनफ्लु चर्चामा ल्याइयो र बैशाख १२ गतेको भुइचालोले निरर्थक सावित गराइदियो । मानौकी स्वाइनफ्लुका विरामीहरुको औषधी नै भुइचालो हो । भुइचालो पछि एकाएक हल्ला साम्य भयो ।
समाजसेवा गर्नेलाई पद र हैसियत केही चाहिदैन । कुनै लाभ पनि चाहिदैन ।
आकाशमा जहाज र हेलीकप्टर उड्दा राजीव विक्रम शाहले नै ल्याए भन्थ्य केही मान्छेहरु । सच्चा समाज सेवी कहलिएका राजीव शाह भाइरल प्रकोपको यत्रो हल्ला हुदाँ उनको कुनै प्रतिक्रिया देखिएन । समाजसेवा गर्नेलाई पद र हैसियत केही चाहिदैन । कुनै लाभ पनि चाहिदैन । सच्चा समाजसेवा भएको भए अहिले जिल्लामा किन अनुहार देखाएनन् राजिवले ? निर्वाचन जित्न अर्को हल्लाको माध्यम थलहको सुविधा सम्पन्न फेसवुके अस्पतालको हालत अहिले के छ ? के उन्लाई समाज सेवा गर्न सांसद पदनै चाहिन्थ्यो ? जनताको अभाव र गरिवीलाई भ¥याङ बनाउने नक्कली समाजसेवीहरुको असली नियत उदांगो भएको छ । अहिले फेरी खासगरी भर्खरै निर्वाचित प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका माननिय र बाम गठबन्धनको आलोचना गर्ने लौरोको रुपमा भाइरल प्रकोप चर्चामा छ । तर यसपाली उक्त सड्यान्त्र सफल हुन सकेन । २०७४ पुस २७ गते प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर २ का माननिय सांसद करविर शाही र प्रतिनिधि सभाका माननिय सांसद तथा पुर्व गृहमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत को पहल कदमीमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर काठमाडौँ देखि जुनिचाँदे डाक्टर र औषधी सहित पुग्यो । त्यस्र लिन सवै सरोकारवालाहरुको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सदरमुकाममा सम्पन्न गरियो ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र फिल्डमा खटिएका चिकित्सकहरुको टोलीले प्रस्तुत गरेको विवरणमा कुनै पनि मानिसमा भाइरलको लक्षण नदेखिएको भेटिये । त्यहाँ अन्य रोगको समस्या भएको, कुपोषण र रोग प्रतिरोगी क्षामतामा कमि भएको, सरसफाइमा कमि लगायतका समस्या विवराण प्रस्तुत गरियो । जनप्रतिनिधिहरुले पनि भनिय जस्तो र हल्ला गरे जस्तो नरहेको कुरा व्यक्त गरे । रुखबाट लडेर मरेका या अन्य रोगबाट मरेका समेत झडापखाला र भाइरल ज्वोरोको सुचिमा दर्ज गरियो । यस्तो अनावश्यक जिल्लालाई हल्लाले कालुको भेडा बाघले खाएको जस्तो र वनाउने होइन । जिल्ला वासीले सिमित स्वार्थलाई त्यागेर समयमै ध्यान दिनु जरुरी भएको छ । भाइरल नै नभएपनि मौसमी रुघाखोकी भएपनि जुनिचाँदेका नागरिकले उपचार गर्न अवसर पाएका छन् र दुई जना माननियहरुले विशेषज्ञ डाक्टर र औषधी सहित हेलीकप्टर ल्याएर अरु कसैले गर्न सक्दैन राजिव शाहले मात्रै गर्छ भन्ने एउटा हल्लाको अन्त्य भएको छ । हल्लै हल्लाको जिल्ला नवनाउँ सवैलाई चेतना भया ।